Posted by ကလိုစေးထူး at 10:30 PM
ဒီဝတ္ထုလေးဖတ်ရတာ တကယ်ပဲ ရင်ထဲ နင့်သွားမိတယ်။
တခါတလေတော့လည်း လူတယောက်ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်ဟာ သူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီး ဒုက္ခပေးတတ်တာပဲနော်။
ကျမကတော့ ဆရာလေးကို အပြစ်မပြောလိုတော့ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူ့အပြစ်ကို သူသိနေမှပဲလေ။
နန်းမွန်ကြည်ရဲ့ ကံကြမ္မာပဲပေါ့ လို့ သက်ပြင်းချရင်း တွေးမိတယ်။
ကိုယ်တာဝန်မယူနိုင်တဲ့ ကိစ္စတခုကို လွယ်လွယ်နဲ့ မပြောသင့်ဘူးဆိုတာ ဒီဝတ္ထုဖတ်ပြီး သင်ခန်းစာလည်း ရမိပါတယ်။ ကိုယ့်စကားတခွန်းဟာ စစချင်းတော့ သူတပါးကို အားပေးသလိုဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ တကယ်တမ်း ထင်သလို ဖြစ်မလာတဲ့အခါ မျှော်လင့်ချက်မဲ့စွာ ရူးသွပ်သွားတတ်တာပဲ … နော်။
၀တ္ထုအစအဆုံးဖတ်ပြီးတော့ အရောင်တောက်တောက် မျက်လုံးလေးတွေ ပျောက်သွားရှာတဲ့ ခေါင်းစုတ်ဖွားနဲ့ မိန်းကလေး နန်းမွန်ကြည်ကိုပဲ မျက်စိထဲ မြင်ယောင်နေမိပါတော့တယ်။
ဒီဝတ္ထုလေးအတွက် ကျေးဇူးအထူးပါ ကိုသံလွင်။
We are trying to publish myanmar blogger book and we also launchedablog to accept manuscripts from the members.
On that blog, we would like to describe some manuscripts from you and other famous bloggers who are good at writing.
Will you allow us to do so, brother? Please let us know.
Thank you very much for your support to the myanmar blogger community...
Mar 22, 2007, 9:27:00 PM
hein ko said...
ဒီဝတ္ထုလေးကိုဖတ်ရတဲ့အတွက်ကျးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်တော်က မုန်းသားလေးတစ်ယောက်ပါ လူတိုင်းလိုလိုမသိတဲ့ နွယ်တန်းနှင့်သောင်လယ် တချိန်တုန်းက ရွာကြီးတရွာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်အခုမှ သိခဲ့ရပါတယ်...စိတ်မကောင်းရတာကတော့ နန်းမွန်ကြည်ရဲ့ဘဝလေးပါပဲ...မျှော်လင့်ချက်မဲ့ခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်အတွက် ဖြစ်ချင်တာ ဖြစ်မလာခဲ့ရင် ရူးသွပ်ခြင်းဆိုတဲ့ဘဝအထိ ရောက်သွားတတ်ပါတယ်..ဒါပေမယ့် နန်းမွန်ကြည် တစ်ယောက်အဲ့ဒီဘဝဆိုးကြီးကိုရောက်မသွားတာပဲ ဝမ်းသာလှပါပြီ... ရွှေမြို့မှ မုန်းသားလေး ကျွန်တော်......
Jun 19, 2014, 9:52:00 PM